Warshad Nidaamka Buuxinta Peristaltic - Shiinaha Nidaamka Buuxinta Bamka Peristaltic Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Mashiinka Culayska Fudud ee YZ15 / 25
Madaxa Bamka Xawliga Ah
Mashiinka Mashiinka Fudud JY15
Heerka BZ15 / 25
OEM Peristaltic saar
Iyada oo la wado Gawaarida
Iyadoo aan Laheyn Darawal
Bamka Peristaltic aasaasiga ah
Bixinta Mashiinka Peristaltic
Ex-Caddaynta Peristaltic saar
Qulqulka Heerka Bamka Peristaltic
Nidaamka Buuxinta ee Peristaltic
Taabashada Shaashadda Peristaltic saar
Buuxinta dareeraha iyo mishiinka wax lagu xidho
Mashiinka Sirinjiga Warshadaha
Shaybaarka Sirinjiga Shaybaarka
Mashiinka Micro Plunger
Kusoo dhawow BEA
Buuxinta dareeraha iyo mashiinka qufulka HGS-118 (P5)
Micro Plunger saar MP12.5-1A
Mashiinka buuxinta otomaatiga ah Waxyaabaha alaabooyinka GZ100-3A waa nidaam buuxiyo bamka peristaltic & xakamaynta oo leh hawl xakameyn caqli leh oo madax banaan oo ay soo saarto shirkadeena. Nidaamka buuxinta wuxuu ka kooban yahay 4 nooc oo cutubyada wadista aasaasiga ah, oo lagu ballaarin karo illaa 32 kanaal; Taxanaha YZ iyo madaxyada bamka ee DMD15 ayaa lagu rakibi karaa si ay macaamiisha u siiyaan fursado kala duwan. Xakameyuhu wuxuu adeegsadaa shaashad taabashada warshad 7-inji ah si uu si cad ugu muujiyo waxa ku jira hawlgalka macmiilka. Feat ...
Halbeegga farsamada Qiyaasta kala-buuxinta: 1ml — 100ml Xilliga buuxinta: 0.5 - 30s Xawaaraha xawaaraha: 1-600rpm Xawaaraha xawaaraha: Si toos ah u xisaab si mugga iyo waqtiga buuxinta. Xagasha Dib u Laabashada Xilliga: 0—360 ° Kalabaydh: geli mugga dhabta ah bamka, waxay si toos ah u samayn kartaa qalab. Ku hagaaji qaddarka xalka khadka tooska ah: Isticmaalayaasha ayaa toosin kara xalka iyo boqolleyda khadka tooska ah Bilowga / joojinta xakamaynta: xiriirada gelinta (jooji-buuxinta markii dhalooyin la'aantu) Waxqabadka Xusuusta: Re ...
Halbeegga Farsamada Xaddiga buuxinta: 0.1ml-30ml Waqtiga buuxinta: 0,5—30s Xawaaraha xawaaraha: Si toos ah u xisaab si mugga iyo waqtiga buuxinta. Xagasha Suugga Xagasha: 0 - 1000 ° Xawaaraha Xawaaraha Qubeyska: Qubeyska maydhista iyo buuxinta ka hor, 15—350 rpm (13 #, 14 #, 19 #, 16 #) Qiyaasta: ku dheji mugga dhabta ah bamka, way si toos ah iskudhaf u samee. Ku hagaaji qadarka xalka khadka tooska ah: Isticmaalayaasha waxay hagaajin karaan xalka xaddiga iyo boqolkiiba qadka internetka Tirada filli ...
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansan mabda'a
tayada marka hore. Wax soo saarkayagu waxay heleen sumcad aad u fiican oo ku saabsan warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..
Room1006,10th dabaqa, dhismaha3, Zhong He Road MAYA. 1, Degmada Feng Tai, Beijing, Shiinaha